Mahazoa fahaiza-miasa miaraka amin'ny Hodges Direct, fizarana iray ao amin'ny Oniversite Hodges
Sokajy: Hodges Direct
Tongasoa eto amin'ny HU Direct, Diviziona Express an'ny Hodges University
Ny Hodges University dia manolotra mari-pankasitrahana sy diplaoma notarihin'ireo mpiasa izay takiana amin'ny faritra sy ny sisa. Anisan'ny faritra ny fahasalamana, teknolojia, orinasa, fitantanana ary famatsiam-bola. Afaka mianatra ao amin'ny campus, amin'ny Internet, ary amin'ny alàlan'ny Teknolojia Enhanced Classroom (TEC) ny mpianatra, izay ahafahan'izy ireo manatrika kilasy na avy aiza na avy aiza, mivantana amin'ny Internet. Hodges University koa dia manolotra miavaka Anglisy ho programa fanamarinana amin'ny fiteny faharoa (ESL).
Manomboka amin'ny toerana malalaky ny Lehigh Acres Goodwill, HU Direct dia hanana fidirana amin'ny efitrano fianarana sy ny biraon'ny mpampianatra, marina ao Lehigh Acres, ao amin'ny CRC Goodwill. Ny kilasy sy ny atrikasa dia azo atao ao amin'ny fiarahamonina Lehigh Acres amin'ny andro sy fotoana mety indrindra amin'ny mponina ao amin'ny fiarahamonina. Hodges University dia fantatry ny manam-pahaizana manokana amin'ny mianatra olon-dehibe, izany no mahatonga ny ankamaroan'ny programa atao amin'ny hariva sy amin'ny faran'ny herinandro ao amin'ny campus, na amin'ny Internet.
Fiaraha-miasa tsy azo inoana - Oniversite Hodges sy Indostria Goodwill
Raha vao jerena, dia mety toa ny Hodges University sy Goodwill Industries any Florida Andrefana tsy hanana zavatra iraisana. Na izany aza, miaraka amin'ireo fikambanana roa miara-miasa dia afaka miatrika tsara kokoa ny filan'ny fiofanana momba ny mpiasa izahay any amin'ny faritra misy anay.
Na ny Oniversiten'i Goodwill sy Hodges dia samy miasa mafy mba hahafahana mahazo azy, saingy misy fomba hafa hitondrana izany amin'ny dingana manaraka. Goodwill dia manolotra fanombohana matanjaka ho an'ireo izay maniry hanomboka na hanova asa noho ny fikorontanana nateraky ny COVID-19. Hodges University dia nanangana hetsika vaovao antsoina hoe HU Direct, An Express Division an'ny Hodges University.
Ity fifanekena ity dia mitondra fahafaham-pianarana sy fanabeazana bebe kokoa ho an'ny mponina, eo amin'ny fiarahamonin'izy ireo.
Mifandraisa aminay anio raha mila fanazavana fanampiny!
Direct ho anao ve ny HU?
Raha liana amin'ny fanitarana ny fahaiza-miasa ianao, dia ho anao ny HU Direct!
Inona avy ireo fampianarana azo atao miaraka amin'ny Hodges Direct?
Ny kilasy dia hisy alina sy faran'ny herinandro ao amin'ny Goodwill Industries Lehigh Acres Community Resource Centers (CRC). Anisan'izany ny fampianarana:
Mpanara-maso ny laharana voalohany
Professionalisme ao amin'ny toeram-piasana
Làlana mankany amin'ny fananana trano
Direct Professional Professional
Ny valisoa lehibe indrindra azontsika dia ny fahitana izany fiheverana fanantenana sy fahatokisana vaovao izany rehefa mahazo fahalalana sy fahaizana vaovao ireo mpianatra izay hanampy azy ireo hahatsapa ny nofinofin'izy ireo. Izy io dia fiatraikany tsara izay hitohy mandritra ny taranaka maro.